China TY320-3 Bulldozer Mugadziri uye mutengesi | Xuanhua
TY320-3 bulldozer iri semi-rigid yakaturikwa, hydraulic kuchinjisa, hydraulic inodzorwa track mhando bulldozer. Mapuraneti, simba rekuchinja simba rinoitwa Unilever. Iyo yekushandisa sisitimu yakagadzirirwa maererano neyemunhu uye yemuchina mainjiniya inoita kushanda zvirinyore, zvinobudirira uye nemazvo.
TY320-3 bulldozer iri semi-rigid yakaturikwa, hydraulic kuchinjisa, hydraulic inodzorwa track mhando bulldozer. Mapuraneti, simba rekuchinja simba rinoitwa Unilever. Iyo yekushandisa sisitimu yakagadzirirwa maererano neyemunhu uye yemuchina mainjiniya inoita kushanda zvirinyore, zvinobudirira uye nemazvo. Simba rakasimba, kuita kwakanakisa, kushanda kwakanyanya kushanda uye kuona kwakapamhamha kunoratidza maficha ekubatsira. Inesarudzo inosanganisira U-blade, matatu shank ripper, ROPS uye zvimwe zvigadzirwa. Ndiyo sarudzo yako yakanakisa yekuvaka nzira, hydro-magetsi kuvaka, kushandurwa kwemunda, kuvaka chiteshi, kusimudzira kwemugodhi uye zvimwe zvivakwa.
Dozer: U Semi-U Nereza
Kushanda kwekushanda (Kg): 34000
Kushanda kwesimba (Ine ripper) (Kg): 38500
Kumanikidza kwepasi (kusanganisira ripper) (KPa): 0.094
Nzira yekuyerera (mm): 2140
Min. clearance yepasi (mm): 500
Dozing Chikamu (mm): 41301590
Kudonha kugona (m): 9.2
Max. kuchera kudzika (mm): 560
Zviyero zvese (mm): 688041303640
Rudzi: Cummins NTA855-C360
Yakatemwa chimurenga (rpm): 2000
Flywheel simba (KW): 239
Number emakirinda-borestroke (mm): 6-139.7152.4
Kutanga nzira: Magetsi kutanga 24V 11kW
Type: Swing mhando yesprayed danda
Yakasimudzwa chimiro cheiyerizer bar: 7
Huwandu hwevanyengeri vanofamba (rumwe rutivi): 7
Tevera kukakavara: Hydraulic yakagadziriswa
Upamhi hweshangu (mm): 560
Nzira yekutevera (mm): 228.6
Pamberi (Km / h) 0-3.6 0-6.6 0-11.5
Kudzokera (Km / h) 0-4.4 0-7.8 0-13.5
Max. kumanikidza system (MPa): 13.7
Pombi mhando: Gears pombi
Shanduro kuburitsaL / min: 335
Kufambisa: Mapuraneti giya, akawanda-disc clutch, hydraulic actuated, kumanikidzwa lubrication negiya pombi, 3 kumberi kumhanya uye 3 yekumhanyisa kumhanya.
Steering batira: Wet, Multiple dhisiki batira, Chitubu rakatakura, hydraulically Actuated.
Braking batira: Wet, bhendi akamedura, vakavhiyiwa pamwe hydraulic booster uye hydraulic nokupiringidza.
Yekupedzisira dhiraivha: Spur giya, kudzikisira kaviri, kupwanya girisi.
Pashure: TY230-3 Bulldozer
Zvadaro: SHEHWA-360-DTH yakasarudzika inokambaira yakagadzika pamusoro pe hydraulic pasi-iyo-gomba rekuchera rig